I-Real Codiguin Apk Download Ye-Android [Uhlelo Lokusebenza] - I-Luso Gamer
I-Real Codiguin Apk Ukulanda Kwe-Android [Uhlelo Lokusebenza]
Uma ungumlandeli omkhulu we-Garena Free Fire, kufanele-ke ujwayele uhlelo lwekhodi yokuhlenga. Ukusebenzisa amakhodi kuzosiza ekuzuzeni imiklomelo ehlukene ngaphakathi kokudlala kwegeyimu. Ukwenza inqubo ibe lula futhi ibe lula abathuthukisi bahlele i-Real Codiguin.
Empeleni, uhlelo lokusebenza esilusekelayo lapha olwangempela futhi aludingi ukubhalisa noma ukubhaliswa. Khumbula ukuthi uhlelo lokusebenza luyafinyeleleka ukulanda kusuka lapha ngokuchofoza okukodwa. Lokhu kusho ukuthi manje abasebenzisi be-Android bangalanda kalula i-Apk.
Inqubo yokufaka nokusebenzisa i-Apk inzima. Kodwa ungakhathazeki ngoba lapha sizochaza leyo mininingwane eyinhloko kafushane ngazo zonke izinyathelo ezidingekayo. Ukulanda inguqulo yakamuva yohlelo sicela uchofoze isixhumanisi esinikeziwe.
Iyini i-Real Codiguin Apk
I-Real Codiguin Android iwuhlelo lokusebenza lwe-Android olusekela umuntu wesithathu. Lokho kuvumela abadlali begeyimu ye-Garena Free Fire ukuthi basebenzise amakhodi angapheli mahhala. Okudingeka bakwenze nje ukufinyelela isicelo bese behambisa amakhodi ngendlela.
Ngaphambi kokutholwa kwalolu hlelo lokusebenza, inqubo yayibhekwa njengemanuwali. Abalandeli bayacelwa ukuthi baseshe izixhumanisi ku-inthanethi. Kunezixhumanisi zomgunyathi eziningi ezihambahambayo futhi abalandeli sebevele bathintwe yilezi zixhumanisi zomgunyathi.
Yize singakwazi ukuthola isicelo esisemthethweni. Ngenxa yokungabikho kwesistimu esemthethweni, abasebenzisi bangase bangakwazi ukuqhubeka kahle. Ngisho nabadlali bangase bafike ezindaweni ezingafanele ngenxa yezixhumanisi zomgunyathi. Kamuva labo badlali bakhalaza ngokweba amakhodi okusebenzisa.
Kucatshangelwa izindaba zomthetho kanye nezicelo zabalandeli. Ochwepheshe ekugcineni balethe lesi sixazululo esimangalisayo kubalandeli beFF. Manje ukufaka inguqulo yakamuva ye-Apk kuzovumela abadlali ukuthi bajabulele ukunikeza amakhodi angapheli ngokushelela ngaphandle kwezimvume.
Igama I-Codiguin yangempela
Unjiniyela MF APPS
Igama lephakheji com.mfmobile.resgatecodiguin
Ngisho nabasebenzisi akudingekile ukuthi bacinge ku-inthanethi ukuze bathole izixhumanisi zesiteshi ezisemthethweni noma imithombo. Vele ufake uhlelo lokusebenza olulodwa bese uqhubeke. Khumbula uma unentshisekelo kule nqubo evikelekile bese ulanda inguqulo yakamuva yefayela le-Apk kusuka lapha.
Manje qala inqubo yokufaka ngokuchofoza ifayela le-Apk elilandiwe. Uma ukufakwa sekuqediwe, manje vakashela imenyu yeselula bese uqalisa uhlelo lokusebenza. Ngaphezu kwalokho, inkundla ayilokothi ithole idatha yomsebenzisi noma imininingwane yokungena.
Okusho ukuthi ayisoze yabamba noma igcine noma yiluphi ulwazi. Ngokucabangela usizo lwefeni, onjiniyela bafaka le nkinobho yomlando. Ngaphakathi kwalesi sigaba, abadlali be-FF bayakwazi ukulandelela amakhodi okusebenzisa.
Uma umlandeli engakwazi ukunikeza amasevisi ngenxa yemikhawulo eyinhloko. Bese sincoma ukuthi umsebenzisi enze ithikithi futhi axhumane ngqo nesikhungo sosizo. Sikholelwa ukuthi isikhungo sosizo sizohlinzeka ngosizo oluqondile ngamafuphi.
Ngakho-ke uhlala ufuna ukuthola uhlelo lokusebenza ku-inthanethi. Lokho kusiza ekusebenziseni amakhodi e-Garena Free Fire ngokuqondile ngaphandle kosizo lomuntu wesithathu. Bese sincoma labo badlali begeyimu ye-Android ukuthi bafake I-Real Codiguin Download.
Ukufaka uhlelo lokusebenza kunikeza isiteshi esivikelekile.
Abadlali bamageyimu abangakwazi ukusebenzisa amakhodi amaningi.
Ayikho idatha ezogcinwa lapha.
Okusho ukuthi umsebenzisi uvikeleke ngokuphelele ukuthi angayisebenzisa.
I-interface yohlelo lokusebenza igcinwa ilula.
Ungalanda Kanjani I-Real Codiguin FF
Inguqulo yakamuva yohlelo lokusebenza iyafinyeleleka ukuze ilandwe ku-Google Play Isitolo. Kodwa ngenxa yezinkinga ezithile ezibalulekile kanye nemikhawulo, i-Apk ihlukaniswa esigabeni esikhawulela. Okusho ukuthi ama-smartphone afanelekile kuphela avunyelwe ukulanda ifayela lohlelo lokusebenza.
Esimeni esinjalo lapho abasebenzisi bengakwazi ukulanda ifayela lohlelo. Kumelwe uvakashele iwebhusayithi yethu ngoba lapha kuwebhusayithi yethu, abalandeli bangalanda inguqulo esemthethweni ngaphandle kwemvume. Ukulanda i-Apk sicela uchofoze isixhumanisi esishiwo.
Sesivele sifake ifayela le-App kuma-smartphones ahlukene futhi asitholanga nkinga eqondile. Ngisho nezikhulu zithi isicelo sivikelekile ukuthi singafakwa futhi sisetshenziswe. Asilokothi sibe ngabanikazi bamalungelo okushicilela ngakho-ke faka futhi usebenzise uhlelo lokusebenza ngokuzifaka wena engozini.
Inqwaba yezinye izinhlelo zokusebenza ezihlobene ne-Garena Free Fire zishicilelwa lapha. Ukuze uhlole lawo mathuluzi amanye ahlobene sicela ulandele izixhumanisi. Okukhona Ungayisebenzisa Kanjani Sebenzisa Ikhodi Yokusebenzisa Umlilo Wamahhala 2021 futhi Umvuzo FF Apk.
Ngakho-ke baphumelele ekutholeni amakhodi okuhlenga kodwa abakwazi kungxenyekazi eyiqiniso. Lokho kuvumela abadlali be-FF ukuthi basebenzise amakhodi ngaphandle kwemvume. Khona-ke mayelana nalokhu, sincoma abadlali bamageyimu ukuthi bafake i-Real Codiguin Apk.
Izigaba Amathuluzi, Apps Amathegi I-Codiguin yangempela, I-Real Codiguin Apk, I-Real Codiguin Download, I-Real Codiguin FF Imeyili kwemikhumbi
I-Project Z Apk Download For Android [MyAnmar 2022]
I-PestaGo Apk Download Ye-Android [Ibuyekezwe ngo-2022]